Yan Aung: Blogspot အားလုံးအတွက် EOT လာပြီ...
EOT မရှိသေးတာနဲ့ အတော်ပဲဗျို့။ ကျေးဇူးပါ။
EOT ရှိုတာ ဂျာရဲဟင်? ကျကယ် ညကျိလို့ပါဂျာ?!
ကိုရန်အောင်ရေ...သားသားလည်း လိုချင်တယ်....ဒါပေမယ့် EOT files ၄ခုစလုံး တစ်ခုမှ ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး ကူညီ ပါအုံးဗျာ...ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေ သေသွားပြီးလား....မျှော်နေတယ်နော်..........ကူညီပါအုံး...